Maalinta: Febraayo 10, 2020
Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada Gobolka ayaa ku dhawaaqay tirakoobka diyaaradaha, rakaabka, iyo tirakoobka xamuulka bisha Janaayo 2020. Sidaas awgeed, bishii Janaayo 2020; Tirada diyaaradaha soo dego ama ka qaada madaaradaha; [More ...]
Taariikhda Karaköy Tunnel, oo ah marinka dhulka hoostiisa mara ee adduunka, ayaa u dabaaldegi doonta sannad-guuradeedii 145aad iyo Nostalgic Tram, oo ah astaanta Beyoğlu, oo u dabbaal-degi doonta sannad-kiisii ​​106-aad. Sanadkan IETT waxay u dabaaldegaysaa xuska Tunnel iyo Nostalgic Tram. Talaado, Feberaayo 11 [More ...]
Markii ugu horreysay, Agaasimeyaasha Guud ee Magaalada Ankara ee Magaaladda Ankara ee Magaceedu yahay EGO wuxuu qabanqaabiyaa tababar wax ku ool ah kaas oo darawalada adeegsanaya gaadiidka dadweynaha ay si wax ku ool ah ula xiriiri karaan muwaadiniinta. Wuxuu socon doonaa illaa dhamaadka Febraayo [More ...]
Iyada oo sugaysa maalin bilo ah oo ku taal xeebta Beykoz, taariikhdii hore ee taariikhiga ahayd ee Paşabahçe Ferry, oo mar kale loogu wareejiyay Wadooyinka Magaalada iyadoo la bilaabayo ololihii IMM, ayaa la bilaabay in loo jiido Haliç Shipyard si loo dayactiro loona dayactiro. Markabka dib loo soo celin doono wuxuu ku noqon doonaa Bosphorus iyo [More ...]
Doomaha jasiiradda iyo Havaist duulimaadyada ayaa lagu soo qaaday Istanbul. Dawladda Hoose ee Magaalada Istambul (IMM), kororka qiimaha gaadiidka dadweynaha ayaa dhaqan galaya ilaa maanta, iyo qiimaha tigidhada jasiiradaha oo buuxa oo kuxiran Wadooyinka Magaalada [More ...]
Marmaray, oo ay maamusho Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa lagu soo daray nidaamka wareejinta Istanbulkart, iyadoo go'aanka UKOME maanta la dhaqan geliyay. Markaa, muwaadiniinta haysta tigidh buuxa si ay u helaan Marmaray ka dib marka la raaco gaadiidka dadweynaha ayaa beddeli doona 7,75 TL [More ...]
Dhismaha tareenka dhulka hoostiisa mara ee AKM-tareenka, oo bixin doona gaadiid toos ah inta udhaxeysa Kızılay iyo Keçiören, ayaa la qorsheynayaa in la dhameystiro sanadka soo socda. Marka khadka cusub la howl galayo, muwaadiniintu qasab kuma ahan inay hop-ka-hop-ka ah ka galaan xarunta AKM. Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa lagu daabacay degelkeeda rasmiga ah [More ...]
Kooxaha saxiixayaasha ee ku xiran Qeybta Maareynta Wadooyinka ee Waaxda Kocaeli Magaalo Weynta Magaalada Metropolitan waxay si dhaqso leh wax uga qabanayaan nidaamyada calaamadaha gobolka oo dhan. AMNIGA TRAFFIC Kocaeli Magaalo-Weyne Magaalada Waxyaabaha ugu muhiimsan ee taraafikada waa [More ...]